Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay rag qirtay in Al-Shabaab katirsanaayeen | Salaan Media
Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay rag qirtay in Al-Shabaab katirsanaayeen
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgalo balaaran kasameeyeen Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Howlgalka ayaa ahaa mid lagu baadi goobayay dhalinyaro la sheegay in Magaalada amaan daro kawadeen xariirna kala dhaxeeyo Dagaalyahanada Xarakada Al-Shabaab.
Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Baay Shiine Macalin Nuurow oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay howlgalo ay magaalada kasameeyeen ay kusoo qabteen dhalinyaro badan oo Al-Shabaab lala xadhiidhinayo kuna howlanaa falalka amaan daro.
Shiine Macalin Nuurow ayaa xusay in qaar kamid ah dhalinyaradii ay soo qabteen in ay qirteen in Al-Shabaab katirsanaayeen waxa uuna intaa raaciyay in saldhigyada loo gudbiyay baaritaano dheeraad ahna ay kusocdaan.
Dhinaca kale Magaalada Baydhabo ayaa hada waxa ay Ciidamada ka wadaan adkeynta amaanka Magaalada iyadoona la fiayo in maalmaha soo aadan magaaladaasi uu ka furmo shir lagu dhisayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.